Safarka Tareenka Khatarta ah ee Dalxiisayaasha - Ma Jirtaa Fursad?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Dalxiiska » Safarka Tareenka Khatarta ah ee Dalxiisayaasha - Ma Jirtaa Fursad?
Safarka Dalxiiska • Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kanada • Wararka Shiinaha • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • News • Ruwanda News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
CN Tower EdgeWalk - Lahaanshaha sawirka cntower.ca
Baraha bulshada, iyo xitaa qaar ka mid ah warbaahintii caadiga ahayd ayaa dhammaantood ahaa buzz ka hor xiisadda COVID, markii sawirrada qaar ka mid ah lamaane da 'yar oo dalxiis ah ay ka soo muuqdeen iyagoo ka soo laalaada tareenka Sri Lankan ee ka tagista khaniisiinta, oo dhadhaminaya waqtiga xiisaha leh.
Waxaa jiray doodo kulul oo ku saabsan qaabkan kor u qaadista Sri Lanka, iyadoo dad badani ay ka hadlayeen halista dhaqankan oo kale.
Waxaa jiray walaac ah inay Sri Lanka u keeni doonto sumcad xumo haddii wax khatar ah ay dhacaan.
Qeybtan tareenka ee raacda waddada dalka korkiisa ayaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah jidadka tareen ee ugu muuqaal-qurxoon adduunka.
Oo si sax ah ayaan u maleynayaa. Aniga qudhaydu waxaan ahaa mid ku biiray kooxda heesaha oo si kulul uga hadlay arrintan.
Si kastaba ha ahaatee anigoo ka fikiraya sanduuqa, waxaan ku qasbanaaday inaan ka fikiro - Ma ku abuuri karnaa fursad halkan?
Khibradda cusub iyo dalxiiska xiisaha badan ee maanta
Shaki kuma jiro inay jirto qayb cusub oo garasho leh, ka yar, khibrad iyo dalxiis raadinta dalxiisayaasha, soo ifbaxaya oo socdaalaya adduunka oo dhan. Waxay yihiin kuwo aad u internet -ka iyo baraha warbaahinta bulshada, oo raadinaya waayo -aragnimo ka sii xiiso iyo xiiso badan, badanaana aad bay u miyir qabaan bay'ada. Badanaa waxaa la arkaa iyaga oo sahaminaya ciidaha aan la garaacin, oo loo qorsheeyay shaqsi ahaan hadba baahidooda iyo rabitaankooda.
Qarniyadii oo dhan, aadamuhu wuxuu riixayay xadka sahaminta: waxaan qabsanay dhulka, badda iyo bannaanba. Waxaan daahfurnay waxyaalo yaab badan oo aan la garanaynin oo ilaa hadda ka jira oonkeenna u ooman aqoonta.
Dalxiisayaashu ma kala duwana. Si ay uga fogaadaan nolol maalmeedkooda cidhiidhiga ah, waxay raadiyaan wax ka duwan, xitaa waxay ku dhiiradaan meelo cadaawad leh ama khatar ah si ay ula kulmaan xiisaha ogaanshaha iyo dareenka quudhsiga. Mar dambe ma aha qol huteel oo nadiif ah oo leh tas -hiilaad kala duwan, cunto wanaagsan, iyo cadceed qaar ku filan dalxiiska.
Sida laga soo xigtay booking.com, u -hamminta waayo -aragnimada hantida maaddiga ah waxay sii wadaysaa inay sii waddo rabitaanka dadka socotada ah ee safarada aadka u cajiibka ah oo aan la iloobi karin: 45% dadka socotada ah waxay maanka ku hayaan liiska baaldi. Waxay u badan tahay inay ka soo muuqdaan liistada baaldiyo waa kuwa xiise-doonka ah ee doonaya inay booqdaan jardiinada mawduuca caanka ah ee adduunka, socotada doonaya inay tagaan safar tareen oo hal-abuur leh, ama booqanaya meel fog ama meel adag.
Aragtida dhimista wadista ee cilmu-nafsiga waxay dhajisaa in qofku uusan waligiis ku sugnayn dhammaystir dhammaystiran, sidaas darteedna, mar walba waxaa jira dariiqyo u baahan in la qanciyo. Dadka iyo xayawaanka kale waxay si iskood ah u kordhiyaan xiisadda iyagoo sahaminaya deegaankooda aan la garanayn, walbahaarka is-kicinaya, kana guuraya aagagga raaxada. Tani waxay iyaga siinaysaa dareen wax-qabad iyo is-qancin.
Sidaa darteed xiisaha aan la aqoon, soo -jeedinta iyo deg -degga adrenaline ayaa soo jiita dadka safarka ah.
Maxay dalal kale qabteen?
Sidii aan soo sheegnay, dalal badan ayaa horumarinaya waayo -aragnimadooda gaarka ah, xusuusta leh, iyo xiisaha u leh soo -saarka badeecadooda. Dhowr ayaa lagu sharxay hoosta.
Ku soco buundada Harbor ee Sydney
Kooxo yaryar ayaa lagu socdaa iyaga oo maraya buundada weyn ee birta ah ee habaysan ee Buundada Harbor ee Sydney. Heerka riwaayadaha 360 deg. ka eeg buundada, 135 mitir oo ka sarraysa dhulka, dekedda, iyo guriga Sydney Opera ee u dhow, iyada oo gebi ahaanba la soo gaadhay waxyaallaha ayaa runtii ah waayo -aragnimo naadir ah oo xiiso leh.
Coiling Dragon Cliff skywalk, Zhangjiajie, Shiinaha
Woqooyi -galbeed ee gobolka Hunan ee Shiinaha, booqdayaashu waxay ku qaadan karaan socod tamashle ah oo ay maraan waddada lugta leh ee ku dheggan Buurta Tianmen - 4,700 fuudh oo dhulka ka sarraysa.
Jidka dhalada dhalada ku jira oo dhererkiisu ka badan yahay 300 fuudh oo ballaadhkiisuna yahay ilaa shan fuudh oo keliya, taasoo bixinaysa waayo-aragnimo la sheegay inay tahay mid lagu farxo oo laga naxo.
Soo jiidashada ugu dheer ee Toronto waxay dadka u oggolaanaysaa inay istaagaan qarka kore ee CN Tower oo ay ku tiirsadaan. Waa wareegga buuxa ee ugu sarreeya dunida oo dhan, gacmo-la'aan ah oo ku socda 1.5 mitir oo ballac ah oo ku wareegsan dusha sare ee baalka weyn ee Tower, 356 mitir, 116 sheeko oo dhulka ka sarreeya. EdgeWalk waa Khibrad Saxiixa Kanada iyo Khibrad Saxiixa Ontaariyo.
Gorilla Safaris ee Rwanda
Fursado kaladuwan oo kaladuwan oo gaar ah oo kuyaala Rwanda iyo Uganda ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dhex gasho hawdka si aad u eegto indhaha Gorillas ee deegaankooda dabiiciga ah. Waa waayo -aragnimo safari Afrikaan ah oo gebi ahaanba u gaar ah. Daqiiqadani waxay reebtaa dareen waara oo lama ilaawaan ah oo aad ugu soo dhowaanaya bahalkan haybadda badan.
Kuwani waa dhowr. Markaa waxaa jira duruufo kala duwan oo soojiidasho leh oo soo jiita dalxiisayaasha adduunka oo dhan.
Nabadgelyada - waa xaaladda ugu weyn
Dhammaan dalxiisyadan xiisaha badan ee u muuqda kuwa halista ah ee dalxiiska waxay leeyihiin hal hoose oo aan waligeed waxyeello u geysan-badbaado.
Nabadgelyadu aad bay muhiim ugu tahay dhammaan waxqabadyadan waxaana la mariyaa hubin adag oo dib -u -eegis lagu sameeyo. Dhammaan shaqaalihii hagi jiray oo wax u sheegi jiray dalxiisayaashan xiisaha badan ayaa si fiican loo tababaray oo loo edbiyey.
Qalab kasta oo loo isticmaalo badbaadada sida suumanka iyo suumanka badbaadada waxaa loogu talagalay heerarka ugu sarreeya waxaana marmar la tijaabiyaa. Waxba fursad looma daayo oo haddii ay jirto wax yar oo khatar ah oo ay sabab u tahay xaalad kasta oo aan la filayn oo deegaanka ah, soo jiidashada ayaa si ku -meelgaar ah loo xiraa. (tusaale ahaan, marka ay jiraan dabaylo xoog leh, socodka buundada Sydney Harbor waa la hakiyaa).
Tallaabooyinka badbaadada noocan oo kale ah waa lama huraan lama huraan ah, sababtoo ah shil kasta oo lama filaan ah wuxuu u horseedi karaa cawaaqib xun oo daran dacwadda iyo xitaa xiritaanka soo jiidashada.
Haddaba ka waran raacitaanka tareenkayaga?
Soo jiidashada tareenka kor -u -kaca ee Sri Lankan (badiyaa inta u dhaxaysa Nanu Oya iyo Ella - qaybta ugu muuqaal -qurxoon) waa xaqiiqda ah in dalxiisku uu istaagi karo cidhifka albaabka jidka tareenka ee furan oo uu dareemi karo neecaw qabow oo wejiyadooda ka soo hor jeedda dalka quruxda badan ee quruxda badan iyo beeraha shaaha. Tani waa wax inta badan dalxiisayaasha reer galbeedka aysan ku soo laaban karin gurigoodii, halkaas oo dhammaan albaabada tareenka si toos ah loo xiro marka tareenku bilaabo dhaqaajinta.
Dhab ahaantii waxaa la ii sheegay in qaar ka mid ah wakiilada dalxiiska ee Australia ay si gaar ah u weydiistaan ​​dalxiisayaashu inay u diyaariyaan waayo -aragnimadan, marka ay ballansanayaan socdaalkooda.
Marka maxaad u noqon weyday hal -abuurnimo oo aad u samaysaa soo jiidasho habboon tan?
Miyaanan wax ka beddeli karin hal gaari si aan u helno balakoon furan oo dhinac ah oo qofku bannaanka istaagi karo oo dareemi karo jawiga furan? Waxaa lagu rakibi karaa biraha badbaadada habboon qof walbana wuxuu ku dhejin karaa gaadhiga isagoo suun ah (sida waxa loo isticmaalo meelaha kale ee soo jiidashada leh halkaas oo is -dhexgalku u furan yahay walxaha). Kharash gaar ah ayaa laga qaadi karaa waayo -aragnimadan.
Hal qodob oo doorbidaya dhinaca nabadgelyada ayaa ah inta lagu gudajiro fidintaan, iyadoo ay sabab u tahay dabacsanaanta sare, tareenku wuxuu ku socdaa xawaare xawli ah, oo ka duwan waddamada shisheeye oo xawaaruhu uu gaari karo 80-100 kms saacaddii.
Soo jiidashadaan waxaa loo adeegsan karaa sidii dakhli -dhaliyaha Waaxda Tareenka maadaama dalxiisayaasha doonaya inay la kulmaan xiisahaas laga qaadi karo lacag, waqti cayiman oo ay isticmaali karaan xarunta.
In kasta oo ay tani u ekaan karto mid fudud, dhab ahaantii waxaa jiri kara dhowr arrimood oo saadka ah oo u baahan in wax laga qabto.
Laakiin haddii ay jirto rabitaan, iyo waaxyaha kala duwan ee ku lug leh dhammaantood waxay arki karaan fursadda, oo ay u aadi karaan mowjad isku mid ah, iyada oo la jaray xafiisyada aan caadiga ahayn ee sida caadiga ah jira, markaa hubaal ma noqon doonto wax adag.
Laakiin dulucda guud ee dawadan oo dhan, ayaa ah inay tahay inaan ka fikirno sanduuqa oo aan qabanno dhammaan fursadaha suurtagalka ah ee la heli karo, gaar ahaan markaan si tartiib tartiib ah ugu furno dalxiisayaasha masiibada ka dib. Waxaan aad ula qabsannay in aan ka xuntahay oo aan ka fekerno dhammaan cilladaha jira. Laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo weli la qaban karo haddii ay jiraan dad yar oo dhiirran oo u heellan inay isu yimaadaan.
Dalxiiska ka dib dhammaantiis run ahaantii waxay muujinayaan meherado iyo iyada oo aan lahayn hal -abuurnimo, argagax, jilaayaal, iyo bandhig -faneed, waa maxay muujinta ganacsiga?